आफूलाई नसोधि किन जन्माएको भन्दै आमाबाबुविरुद्ध मुद्दा ! « Sansar News
आफूलाई नसोधि किन जन्माएको भन्दै आमाबाबुविरुद्ध मुद्दा !
२५ माघ २०७५, शुक्रबार ०९:१३
२५ माघ, काठमाण्डौं । ‘मलाई यस धर्तिमा आँखा खोल्ने मौका दिनुभएकोमा आमा बुबालाई धन्यवाद !’ भन्ने धेरै छोराहरु छन् यो संसारमा । तर, एक छोराले भने आफ्ना आमाबाबु विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् । त्यो पनि के कारण होला पाठकबृन्द जान्नका लागि तपाइ उत्सुक बन्नुहुन्छ ।
कहिले काँही रिसका बेला म किन जन्मिए हुँला, आमा बाबाले मलाई किन जन्माए होलान् भन्ने केही छोरा छोरी पनि छन् समाजमा । तर, मलाई किन जन्माएको रु मैले बाँच्नका लागि यति संघर्ष गर्नु परेको छ, यसको क्षतिपुर्ति कसले तिर्छ रु भन्दै आमा बाबुलाई मुद्दा हाल्न खोज्ने छोरा पनि भेटिएका छन् । उनी टाढाका होइनन्, पाठकबृन्द हाम्रै छिमेकी देश भारतका २७ वर्षीय व्यवसायी राफेल सामुयल हुन् । उनले जीवनभर आफूले दुःख झेल्नुपर्ने भएकाले बच्चा जन्माउनु गलत भएको बताएका छन् । तर, उनी कुनै पनि व्यक्ति जन्मनु अघि सहमति लिन नसकिने पनि स्वीकार्छन् ।
सामुयल ‘आफू जन्मनका लागि कसैले पनि निर्णय नलिने’ दावी गर्छन् । उनी अनुमति विना आफूलाई जन्माएको भन्दै बाबु आमासँग रुष्ट छन् । ‘हामीले आफूलाई जन्माउनका लागि कसैसँग आग्रह नगरेकाले बाँकी जीवन बाँच्नका लागि क्षतिपूर्तिस्वरुप केही रकम दिनुपर्छ’ उनले भने ।
सामुयलले आफ्ना आमाबाबुलाइ निकै माया गर्ने तर, उनीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि आफूलाई जन्माएको उनको दावी छ ।
उनका आमाबाबु दुवै वकिल हुन् । उनले आफ्नो व्यवसायमा संलग्न भएको र जीवनयापन सहज रुपमा चलिरहेको बताएका छन् । ‘तर, बच्चा जन्माउनु भनेको दासता हो,’ उनले भने, ‘ म एक जीवनलाई किन विद्यालय, अध्ययन, व्यापार, काम, करिअर, आदिको झमेलामा फसाउँ रु’ उनी भन्छन् ।
उनकी आमा कभिता कर्नाड सामुयलले विज्ञप्तिमार्फत् छोराको असहमतिप्रति प्रतिक्रिया जनाएकीछन् । ‘आफ्ना वकिल आमाबाबुलाई अदालतमा लैजाने मेरो छोराको निर्णयको म प्रशंसा गर्छु । यदि उसलाई जन्माउनु पूर्वसहमति लिन सम्भव थियो भने तर्कसंगत व्याख्यासहित आए म गल्ति स्विकार्न तयार छु ।’ एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै शुक्रबारको कान्तिपुरले लेखेको छ ।